jeudi, 17 décembre 2020 19:29
Tranom-boky ho an’ny daholobe : Nahazo efitrano vaovao ny Tranombokim-pirenena
Notokana androany teny amin’ny Tranombokim-pirenena ny efitrano iray vaovao napetraka ho famakiam-boky hoan’ireo sokajin’olona rehetra, toy ny boky fianarana, fialamboly, ny fikarohana maro, izay manampy amin’ny fahalalana ankapobeany. Nisy ihany koa ny tranom-boky ara-kajy mirindra, izay tafiditra ao anatin’ny fivoarana tanteraka mba ahafahan’ireo mpamaky boky mikaroka amin’ny alalan’ny solosaina raha tsy dia havanana amin’ny fikarohana amin’ny boky taratasy ilay mpamaky, ary efa misy ihany koa ny tabilety izay azo vakina avy hatrany izay fiaraha-miasa tamin’ny masoivoho frantsay tamin’ny fanampiana ireo solosaina. Anisan’ny nisongadia tamin’ity lanonam-panokafana ity ihany koa ny fitokanana ny efitrano David JAOMANORO izay mpanoratra sy poeta nanana ny toerany teo amin’ny tontolon’ny literatiora Malagasy, ka izay no nosafidianana azy manokana.
jeudi, 10 décembre 2020 19:38
Fankasitrahana : Notolorana mari-boninahitra
Notontosaina tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ny fanolorana ny mari-boninahitra "Commandeur de l'ordre National" ho an'i Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle sy Daniel Randriamaharo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 25 novembre 2020 12:41
AmbondronA: '' Ho Soa Hatrany'', rakikira faha-7 an’ny tarika
Hivoaka manerana ny nosy ny 26 novambra 2020 ny rakikira vaovao ny tarika AmbondronA, nampitondraina ny lohateny '' Ho Soa Hatrany''. Rakikira faha-7 an’ny tarika ity hivoaka ity, izay nampahafantarina omaly tao amin’ny Pho Resto Ampasamadinika ny mombamomba azy. Ny taona 2013 no namoaka rakikira farany ny tarika.
dimanche, 22 novembre 2020 16:41
Toerana manan-tantara : Nasiam-panarenana ireo foto-drafitrasa eny Antsahatsiroa
Nasiana fanavaozana sy fanarenana ireo foto-drafitrasa eny Antsahatsiroa, tanàna ambony eto Antananarivo. Voakasik’izany fanavaozana sy famerenana izany ny lalankely, ny tohatoha-bato, ny vahavahady miisa 3, ary ny toerana fanasana lamba. Nasiana jiro manazava ihany koa teny an-toerana. Vita ny asa Tafiditra anatin’ny tetik’asa « Revalorisation du Quartier Historique d’Antsahatsiroa » izy io, ary notokanana ny 20 novambra 2020. Namatsy ara-bola ny tetik’asa ny masoivoho frantsay. (Jereo Sary Tohiny)
Sary fampiaingona nindramina
Mety mahasoa anao : Ahoana ny fianarana teny frantsay na teny vahiny hafa
Betsaka ny ilana teny vahiny, anisan'ny ianarantsika ny teny frantsay, ny teny angilisy. Ny famakiana boky no hitako aingana indrindra. Alefa tsikelikely, dia mora ianarana, aza manao traduction fa vakio fotsiny, mangalaha boky roman ngezangeza soratra ireny, dia vakio, na tsy azo aza dia tohizo, aza maka dictionnaire firy aloha. Ho hitanao fa ho ainao tsy ela. Izay teny matetika miverimberina nefa tsy azo no akana dictionnaire français français raha mianatra teny frantsay, fa aza maka dictionaire français malagasy. Raha misy teny tsy azo ao anatin'ilay fanazavana dictionnaire, dia jerea ao ihany koa ny dikany. Ny teny angilisy ny ahy no misy blocage vokatr'ilay traumatisme verbe irregulier nasaina nadika 1000 fois.Fa ny fanaoko, dia mandefa télé na radio CNN na izay miteny angilisy, dia avelako eo, dia iny no mandalo amin'ny masoko sy henon'ny sofiko mandram-pariva ny andro, ny soratra malaky haiko fa ny accent amerikanina no sarotsarotra.
vendredi, 13 novembre 2020 13:39
Sary nindramina fanehoana
Fantatrao ve : Toa ny felatanana roa ny mampifandray ny tany amin'ny fiarakodia
Toa misosa sy mahazatra fotsiny ny mitaingina fiarakodia. Amin'ny ankapobeny dia misy kodiarana 4 ny fiarakodia iray, izay iny no mampifandray ilay fiara sy ny tany. Raha jerena anefa iny kodiarana iny, dia tsy izy iray manontolo miodidina no mitehina sy mikasika amin'ny tany, fa ampahany kely amin'ny velarany fotsiny ihany, ka rehefa miodina ny kodiarana dia mifandimby mikasoka amin'ny tany fotsiny ilay velaran'ny kodiarana. Raha atambatra ny velaran'ireo kodiarana 4 mikasika amin'ny tany, dia mitovy amin'ny velaran'ny felatanana roa, ka ny felatanana iray dia mitovy amin'ny velaran'ireo kodiarana eo aloha mikasika amin'ny tany, ary felatanana faharoa kosa ny kodiarana roa aoriana. Izany hoe, ny fiara milanja, 2 taonina eo, raha fiara madinika, dia mitombona amin'ny felatanana roa amin'ny tany, voizina handeha hatrany ammin'ny 120 -200km/h amin'ny alalan'ilay felatanana roa, ary ajanona tsy hikorisa amin'ilay felatanana roa raha tiana hijanona, rehefa manindry hisatra amin'ny fiara.
mercredi, 11 novembre 2020 10:39
Mpanakanto : Tapa-tongotra teo ampilalaovana baolina i Dadi Love
Teo amin’ny kianja CAPJI Maroantsetra no nitranga ny ratra nahazo an’i Dadi Love, ny harivarivan’ny talata 10 novambra 2020, nandritra ny lalao ara-pirahalahiana nifanaovan’ny tarika mpihira isany Les Robert sy ny ekipa Dadi Love. Teo am-pitondrana baolina samy irery iny indrindra i Dadi Love no nianjera tampoka ary naratra. Tapaka eo amin'ny feny havana. Efa nahazo fitsaboana izy tao Maroantsetra ary mety halefa tsaboina any Mahajanga. Ao anatin’ny fitetezam-paritra any Analanjirofo ny tarika Dadi Love no izao tratry ny tsy fahasalamana izao. Manana sehatra izy anio sy amin’ny alahady ho avy izao.
samedi, 07 novembre 2020 18:39
Patrimoine : Inauguration restauration Palais Besakana et Manjakamiadana
Le président Andry Rajoelina a annoncé ce 6 novembre que le Rova d’Antananarivo sera désormais appelé « Rova de Madagasikara », et sera érigé en musée qui abritera les éléments de l’Histoire de Madagascar. Le musée sera ouvert au grand public avant la célébration de la fête de la Nativité, le 25 décembre prochain. (Voir Suite Photo)
vendredi, 06 novembre 2020 10:13
Fiangonana FLM : Voafidy ho filoha i Pastora Dr Rakotozafy Denis
Tanterahina ao amin’ny FLM Tsaramandroso Mahajanga ny Komity Sinaoda Lehibe faha-23 an’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Tontosa mandritra izany, ny 05 Novambra 2020, ny fifidianana izay ho Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy.Nahazo isam-bato ambony indrindra (320/483) taorian'ny Fihodinana Faha-4, ary voafidy ho Filohan'ny FLM i Pastora Dr Rakotozafy Denis, hitantana mandritra ny efatra taona. Telo no kandida, dia i Pastora Dr Rakotozafy Denis, Pastora Dr Randrianjaka Olivier ary Pastora Andrianjafy Octave Bénil. Pastora Andrianjafy Octave Bénil, filoha lefitry ny FLM no niakatra ho Filoha nitantana sy namarana ny taom-piasan’ny birao foiben’ity fiangonana lehibe, iray amin’ireo mandrafitra ny FFKM ity taorian’ny nafahatesan’ny Pastora Dr Rakotonirina David, filoha tompon-toerana, ny 11 jolay 2020. Nitandrina tao amin’ny FLM Tanjombato Antananarivo i Pastora Dr. Rakotozafy Denis. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 06 novembre 2020 09:37
Vakoka : 25 taona lasa no nahamay an’Anatirova
6 novambra 1995 – 6 novambra 2020, feno 25 taona katroka androany ny nandravan’ny afo mahery vaika an’Anatirova. May kila hotohoto nandritra izany ny Rova Manjakamiadana. Andro fisaonana sa androm-pifaliana ity andro ity ?